शाहरुखका छोरा आर्यनसँगै पक्राउ परेकी युवती मुनमुन र अरबाज को हुन् ? – Kavrepati
Home / मनोरंजन / शाहरुखका छोरा आर्यनसँगै पक्राउ परेकी युवती मुनमुन र अरबाज को हुन् ?
शाहरुखका छोरा आर्यनसँगै पक्राउ परेकी युवती मुनमुन र अरबाज को हुन् ?
admin3weeks ago	मनोरंजन Leaveacomment 233 Views
काठमाडौं। आइतबार क्रु’जमा भएको पार्टीमा एनसीबीले शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानसँगै अरबाज मर्चेन्ट र मुनमुन धमेचा नामका अन्य २ जनालाई पनि गि’रफ्तार गरेको छ । अरबाज र मुनमुनको साथबाट पनि ब’रा’मद भएको थियो । यी तीनैजनालाई अदालतले १ दिन हिरासतमा राख्न आदेश दिएको थियो । आर्यन खानलाई शाहरुख खानका छोराको रुपमा धेरैले चिन्छन् तर मुनमुन को हुन् भन्ने विषयमा धेरैको चासो बढेको छ ।
मुनमुन दिल्लीकी मोडल हुन् । खासमा मुनमुनको घर मध्य प्रदेशको सागर जिल्लाको तहसिलीमा हो । अहिले त्यो घरमा कोही बस्दैनन् । मुनमुनकी आमाको गत वर्ष निधन भएको थियो । उनका पिताको पहिले नै निधन भइसकेको थियो । मुनमुनका एक भाइ पनि छन् जसको नाम प्रिन्स हो । प्रिन्स दिल्लीमा काम गर्छन् । मुनमुनले स्कुलको पढाइ मध्यप्रदेशको सागरमै पूरा गरेकी हुन् । पछि मुनमुन भोपालमा रहिन् र करिब ६ वर्ष पहिले भाइ प्रिन्सको साथमा दिल्ली गएकी हुन् ।
मुनमुन एक मोडल हुन् । उनले र्याम्प वाक गर्दै गर्दाका कैयौं तस्वीर पनि इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेकी छिन् । मुनमुनलाई पार्टीको पनि सोख छ । उनले पार्टी गर्दै गर्दाका कैयौं तस्वीर पनि शेयर गरेकी छिन् । उनको साथमा उनका साथीहरुका साथै केही बलिउड स्टारहरु पनि देखिन्छन् । मुनमुनले केही शो र विज्ञापनमा काम गरेकी छिन् । उनले सु टि ङ स्टुडियो र फोटो सु टका तस्वीर पनि शेयर गरेकी छिन् । मुनमुनलाई यसैकोआरोपमा के स दर्ता गरिएको छ ।
को हुन् अरवाज मचेन्ट ?
अरबाज शाहरुख खानका छोरा आर्यन खान र सुहाना खानका नजिकका साथी हुन्। अरबाजको सोशल मिडियामा एक विशाल प्रशंसक सूची छ। यद्यपि उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खाता निजी बनाएका छन्। उनको सामाजिक सञ्जालमा ३० हजार भन्दा धेरै फलोअर्स छन्। भारतीय मिडियालाई विश्वास गर्ने हो भने अरबाज पेशामा एक अभिनेता हुन् र उनको सुहाना खान र आर्यन खान संग पार्टी को तस्वीरहरु अक्सर सोशल मीडिया मा भाइरल हुन्छन्।
Previous बच्चा जन्माएको भिडियो प्रियंकाले आफैँ सार्वजनिक गरिन्, घर देखि अस्पताल सम्म को कथा व्यथा यसरी समेटिन (भिडियो सहित)